Intaan qaybahaas u gudbin, run ahaantii waa wax wanaagsan marba xaalada soo koradha in ifafaalo laga baxsho, waayo waa cashar cusub oo ay ku qiyaas qaadan karaan dadka intooda xaqiiq doonka ah mar walbana baadi goobaya daawo ka samaysan qalab sax ah. Markii maxaakimtu soo baxeen sidan oo kale ayay dadku u kala qaybsameen, waxayna dad badan oo Soomaliyeed ka qoreen qoraalo badan oo ku saabsanaa arimahaas, waxaana kamid ahaa qoraal aan cinwaan uga dhigay �Walaal waan wareeraye yaan taageeraa ma maxaakimta mise dowladda?�, waxaadna moodaa falanqeyntii aan qoraalkaas ku xusay qeybo kamida inay run noqdeen ama xaqiiqdooda hadda la arko. Walow cilmi qaybka Rabbi kaliya ogyahay hadana Rabbi wuxuu baray aadanaha taariikhdu inay isa soo cel-celiso sidaa awgeedna ay haboon tahay in diraaso lagu sameeyo ama lagu cibro qaato taarikhda, si looga fakaro waxa dhici kara, isla markaana looga digtoonaado inuusan khaladku soo noq-noqon.
Dagaalkaan wuxuu ahaa dagaal wakiilasho oo aanan dhex marin Soomaaliya iyo Ethiopia kaliya, laakin caalamku uu markhaati ka ahaa inuu ahaa dagaal ay si wayn gacan uga gaysatay dowladda xooga u sheegata caalamka iyaduna wayba qiratay, hadaba aan isla fiirino dowladaas iyo CV-geeda ah dagaal kasoo hurin dalal kale? Deedna waxaa noo kala cadaan kara cidda mudan inay faraxdo iyo cidda mudan inay calool xumaato iyo in waxa dhacay guul yihiin ama bilowgii dhabihii Jahannamo loo qaadi lahaa.
Taarikhda aduunka waxay marag ka tahay wadan walba oo USA si toos ah ama si wakiilasho ah ay faraha ula gasho inuu kasii xumaado siduu ahaa mooyee inuusan kasoo rayn. Maraykankuna sidiisa yahay khasaaro u jooge aanan caqli qaadan, ilayn waa maroodi xoog isbiday oo hal il kaliya wax ka arkee! Tusaale ahaan qorshe dajiyayaasha CIA waxay go�aansadeen inay ka tuuraan ra�iisul wasaarihii Iran 1953 ee la oran jiray Musadiq ee dadkiisu doorteen, laakin markii uu arkay batroolkii oo ay iska boobayaan Ingriiska iyo Maraykanku, wuxuu soo rogay xeerar qaranimo. Qorshahoodu wuxu ahaa inay Shahan meesha keenaan, laakin kuma uusan waarin ilaa uu Ayatulaahi Khumeyni kala wareegay! Cajiib maanta Iran iyo USA sidee isku yihiin akhristoow? Fara gelintaas ma USA iyo Shahan ayaa ku faraxsan maanta mise Axmed Najad?
Fiidnaam USA waxay go�aansatay inay Diem ku badasho Ky, qorshahaasna wuxuu sabab u noqday in 58.000 oo cidanka Marakaykanka ah ku dhintaan wadankaas, 2-malyan oo fiidnaamiyiin ahna ku baab�aan meeshaas, Maraykankuna jab iyo hoog ba�an kala soo noqday. Fara gelintaas yaa ku faraxsan maanta? Yayse taariikhdiisa baalka madow uga qoran tahay ilaa hadda?